ShonaTeam Malachi « 1 »
Rudo rwaJehovha kuna Judha
1 Mutoro weshoko raJehovha kuna Israeri neruoko rwaMaraki.
2 Ndakakudai, anoreva Jehovha. Asi makati: Makatida nei? Esau waiva asiri mukoma waJakove here? anoreva Jehovha; zvakadaro ndakada Jakove;
3 uye ndakavenga Esau, uye ndakaita makomo ake dongo, nenhaka yake yakava yemakava erenje.
4 Kunyange Edhomu akati: Takaitwa varombo, asi tichadzokera ndokuvaka matongo; anoreva seizvi Jehovha wehondo: Ivo vangavaka, asi ini ndichakoromora; uye vachavati: Muganhu wezvakaipa, nevanhu Jehovha vaakatsamwira kusvika pakusingaperi.
5 Zvino meso enyu achaona, uye imwi muchati: Jehovha achakudzwa kubva mhiri kwemugumo waIsraeri.
6 Mwanakomana anokudza baba, nemuranda tenzi wake. Zvino kana ndiri baba, rukudzo rwangu rwuripi? Uye kana ndiri tenzi, kutyiwa kwangu kuripi? anoreva Jehovha wehondo kwamuri, imwi vapristi, munozvidza zita rangu. Zvino munoti: Takazvidza zita renyu mune chipi?
7 Munopa chingwa chakasvibiswa pamusoro pearitari yangu uye munoti: Takakusvibisai pane zvipi? Pakuti munoti: Tafura yaJehovha inozvidzika.
8 Zvino kana muchiswededza chakapofumara kuva chibairo, hapana chakaipa here? Uye kana muchiswededza chakaremara nechinorwara, hapana chakaipa here? Chiswededzei henyu kumutongi wenyu; anokugamuchirai here? Uye anosimudzira chiso chenyu here? Anoreva Jehovha wehondo.
9 Zvino ikozvino, nyengeterai henyu chiso chaMwari, kuti atinzwire ngoni. Izvi zvibve paruoko rwenyu. Achagamuchira zviso zvenyu here? Anoreva Jehovha wehondo.
10 Ndiyani kunyange pakati penyu angapfiga magonhi? Zvino mukasavesera moto pamusoro pearitari yangu pasina mubairo. Handikufaririyi, anoreva Jehovha wehondo, uye handingagamuchiri chipo kubva muruoko rwenyu nemufaro.
11 Nokuti kubva pakubuda kwezuva kusvika pakuvira kwaro, zita rangu richava guru pakati pevechirudzi; nepanzvimbo yose zvipfungaidzo zvinonhuhwira zvichapisirwa zita rangu, nechipo chakachena; nokuti zita rangu richava guru pakati pevechirudzi, anoreva Jehovha wehondo.
12 Asi munorisvibisa zvamunoti: Tafura yaIshe yakasvibiswa; nechibereko chayo, zvekudya zvayo zvinozvidzwa.
13 Uye munoti: Tarirai, zvinonetesa sei! Uye munorifengura mhino, anoreva Jehovha wehondo; uye munounza zvakapambiwa nezvinokamhina nezvinorwara; saizvozvo munounza chipo. Ndakagamuchira izvi nemufaro here muruoko rwenyu? anoreva Jehovha.
14 Zvino ngaatukwe munyengeri ane gondohwe paboka rake, anopika ndokubaira Ishe chakaremara; nokuti ndiri Mambo mukuru, anoreva Jehovha wehondo, uye zita rangu rinotyisa pakati pevechirudzi.